प्रधानमन्त्रीजी, नागरिकता विधेयक बुझाइ पाऊँ! :: अमित ढकाल :: Setopati
बेसारको धारावाहिक प्रवचनबाट छोटो विश्राम लिएर नागरिकता विधेयकबारे हामीलाई बुझाइ दिनुहोस् भन्ने आग्रह छ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने गरी संसदीय समितिले पारित गरेको प्रावधानप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ। संसारमा बिरलै मुलुक होलान् जसले विवाह सम्बन्धमा बाँधिएर आफ्नो देशमा आउने विदेशी नागरिकलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छन्। केही वर्षपछि मात्र र केही सर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था लगभग सबै देशमा छ।
यो प्रावधानमाथि 'नोट-अफ-डिसेन्ट' लेख्ने नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले उठाएका तर्कमा खासै दम छैन। उनीहरूले उठाएका व्यवहारिक प्रश्नको सम्बोधन विधेयकमा उल्लिखित राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थाले गर्छ।
आफूले नचिनेका र नागरिकताको हकमा विभेद गरिएका, होच्याइएका महिलालाई 'बहिनी' र उनका सन्तानलाई भाञ्जाभाञ्जी भनेर राजनीतिज्ञले नेपाली महिलामाथि नुनचुक गरिरहेका छन्। त्यसै पनि त्यो पारिवारिक साइनो हो, राजनीतिक साइनो होइन।
डेढ वर्षअघि नागरिकता कानुनको बहस उत्कर्षमा पुगेका बेला नेता रावलले ट्विटरमा लेखेका थिए, 'कथित समानताको आवरणमा नेपालभित्र विदेशीहरूलाई भित्र्याउने कार्य नहोस् भनी मैले पार्टी र सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु… जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल सिध्याउने खेल नहोस्।'
धेरै राजनीतिज्ञको डर यही हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। तर, 'जनसंख्याका आधारमा नेपाल सिध्याउने खेल' कति तथ्यपूर्ण हो? कति अनावश्यक डर हो वा उत्पादित भ्रम हो? एकपटक तथ्य हेरौं।
त्यसमा मेरो प्रतिप्रश्न छ, 'नेपाली महिलाले विरलै मात्र विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल ल्याउँछन् भने हामीले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले डराउनै परेन। त्यसो भए, यत्रो त्रास उत्पन्न गरेर महिलालाई समान नागरिक हकबाट वञ्चित किन गरिँदै छ?'
प्रधानमन्त्रीजी, 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' बनाउने तपाईंको नारा छ। आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने महिलामाथि राज्यले भेदभाव गरेर यो मुलुक न समृद्ध बन्छ, न त सुखी नै।
'वर्ल्ड ह्यापिनेस इन्डेक्स २०१९' अनुसार फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, आइसल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्ड क्रमश: पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाचौं सुखी मुलुकमा पर्छन्।
भनेपछि थाहा पाउनुभयो त प्रधानमन्त्रीजी, 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' बनाउन के चाहिने रहेछ? आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने महिलालाई चरम उत्पीडनमा राखेर, आर्थिक अधिकार नदिएर, विभेद गरेर कुनै मुलुक आजसम्म 'समृद्ध र सुखी' बन्न सकेको छैन। छ भने उदाहरण दिनुहोला।
मैले नागरिकता विधेयकबारे आफ्ना पनि कुरा राखेँ। भनेँ, 'गणतन्त्र नेपालले मधेसीलाई पहिलो राष्ट्रपति बनायो, महिलालाई दोस्रो। सांकेतिक रूपमा त्यसको ठूलो अर्थ छ। तर, हामीले सुधारलाई तात्विक रूपमा अघि बढाउन सकेनौं। महिलाको समानताका सवालमा त हामी पछाडि फर्कंदै छौं। यो प्रतिगमन इतिहासको रेकर्डमा रहनेछ।'
'तर एउटा इतिहास फेरिन्न,' मैले राष्ट्रपतिलाई भनेँ, 'महिलामाथि यस्तो विभेदपूर्ण नागरिकता कानुन विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपालहरू संसदमा प्रमुख नेता भएका बेला बनाइएको थियो भन्ने इतिहास फेरिन्न।'
यी दुवै गर्नुभएन भने तपाईंको नाममा अर्को पनि रेकर्ड रहने छ- झूट बोलेर महिलामाथि विभेद संस्थागत गर्ने रेकर्ड।
त्यो रेकर्ड तपाईंको नाममा नरहोस् भन्ने मेरो कामना छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ९, २०७७, ०२:१५:००